Galvanized Steel Frame Multi Span PE Film Greenhouse For Agriculture Ọnụ ego Dị ala Maka Osisi Akwukwo nri-PMG001
Gothic gutter jikọtara ọtụtụ ụlọ na-eme ka griin haus bụ nke galvanized steel nke nwere arụmọrụ dị elu nke ike dị elu maka ngwa ibu snow dị elu ma na-ejigide ọnụ ahịa nke dị n'etiti onye na-akụ ihe.’ego mmefu ego, yana kwa ọ nwere uru mgbochi mgbochi dị mma.
siri ike iguzogide ifufe na snow na ezi mgbochi corrosion. N'agbanyeghị akụkụ ọ bụla, ndị na -emepụta ihe agaghị achọta griin haus nke nwere akụ na ụba.
Ọnụ ego nnukwu ihe nkiri PO ihe nkiri na mkpuchi mkpuchi ụdị Gothic Ugbo ala na-eme ọtụtụ oghere nwere tebụl mpịakọta-PMG002
Ịhọrọ mkpuchi mkpuchi dị elu na ihe nkiri PO nnyefe ọkụ dị elu dị ka ihe mkpuchi elu iji dochie iko na -ebelata itinye ego nke ndị na -etinye ego, ebe na -ejigide ihe ịchọ mma na ịdịte aka nke griin haus iko. Na ọ bụ naanị na ọ dị mkpa ka a na -ehicha ihe nkiri dị elu mgbe niile. Mbelata mmezi na ọkwa ikpeazụ, n'aka nke ọzọ, na -ebelata ụfọdụ mmefu.
Glass griin haus maka ịkụ ihe ọkụkụ na ịkụ mkpụrụ-PMG003
Nnukwu ụlọ akwụkwọ ọta akara na-adị ogologo, ịgba mmiri akpaaka/ikuku/ikuku/ọkụ/njikwa okpomọkụ-PMG004
Ụlọ ọrụ na-arụpụta ihe maka China Mfe nrụnye griin haus ifuru Greenhouses na Elliptical Galvanized Tube-PMG005